India oo isku dayeysa inay xakameyso mowjaddii seddaxaad ee Covid-19 | Radio Himilo
Home / COVID 19 / India oo isku dayeysa inay xakameyso mowjaddii seddaxaad ee Covid-19
Himilo – Isbitaalada la tacaalaya bukaanada qaaday feyruska Karona ee caasimadda New Delhi, ayaa buux dhaafiyay, xilli ay saraakiishu xeerinayaan xayiraado cusub oo lagu xakameeyo mowjadda seddaxaad ee cudurka Covid-19.
In ka badan 9-kun oo bukaan ah ayaa talaadadii la dhigay isbitaalada caasimadda, iyadoo kumanaan kiisas cusub si maalinle ah looga soo wariyo magaaladan ay ku nool yihiin 20-ka milyan.
“Waxaa isbitaalkeenu uu ku dhawaa inuu sii shaqeeyo todobaadyo kaliya marka la eego tirada bukaan ee uu qaadi karo” ayuu yiri Dr Srinivas Rajkumar T oo ka hawlgala isbitaalka dadweynaha eek u yaala Delhi.
Dowladda India ayaa wada qorshe ay kusoo rogeyso xayiraad cusub oo tirada dadka loo ogol yahay inay ka qeyb qaataan xafladaha aroosyada ku koobeysa 50-ruux, iyada oo sidoo kale la xiri doono suuqyada oo loo arko inay xudun u yihiin kororka kiisaska Covid-19 ee caasimadda New Delhi.
Previous: New Zealand oo haweenka xiran xijaabka ku biirineysa boliiska
Next: Manchester United oo cusbooneysiineysa dalabkooda Raphael Varane